Banyere Anyị - Shandong Chen lu ọgwụ co. LTD
Shandong Chen lu ọgwụ ngwá co., LTD. Na-emi odude ke mma ala gbara osimiri okirikiri obodo nke egg, bụ a ụlọ ọrụ na ala nri na ọgwụ ọjọọ nchịkwa nnwapụta nke ọpụrụiche na-emekwa ụfọdụ na ahụ ike, ụlọ ọrụ mmepụta ubi X-ray nchedo, ngwá nnyocha na mmepe, mmepụta na ahịa maka mwekota nke elu-tech ụlọ ọrụ. N'etiti ha, mba patent (patent zl2014205451262), nke a na-onwe ha mepụtara, pụrụ ibelata mmetụta nke na-ekekọta na free radiological echebe uwe nke ụlọ ọgwụ.
Anyị ụlọ ọrụ ga-agbaso ihe "eziokwu bụ ntọala nke ntụkwasị obi, àgwà bụ isi iyi nke ume" ụkpụrụ, na-agbalị maka ndụ site na àgwà, na-achọ development na sayensị na nkà na ụzụ, ndị mmadụ-ndị dabeere, mgbe niile mma ngwaahịa mma, afọ ju onye ọrụ chọrọ. Na elu àgwà ngwaahịa na nke zuru okè mgbe-sales ọrụ iji merie ahịa. Anyị ga-aka na aka ka obosara pụta ahịa na-ere ahịa ike a mma echi. Mmadụ Bịa na niile ahịa na-ere ahịa na-akpọ ma ọ bụ na akwụkwọ ozi oge.